DADWAYNOOW KA GARNAQA IDINKU: XAAJADA MURUGSAN EE XISBIYADA SOMALILAND ISKU HAYAAN WAA SIDAN. | Baligubadlemedia.com
DADWAYNOOW KA GARNAQA IDINKU: XAAJADA MURUGSAN EE XISBIYADA SOMALILAND ISKU HAYAAN WAA SIDAN.
January 16, 2019 - Written by admin
Waxaad moodaa in Somaliland loo qadimay siyaasad-wanaagii iyo kala dambayntii. Waxaad moodaa in labadaa qodob (Siyaadad-Wanaagii iyo Kala-dambayntii) meesha ay ka saareen: Tabashooyin iyo Mindi-mindi ku taag.
Waxaad la yaabaysaa oon hore u dhici jirin in maslaxada umada, sida wax ka qabashada sixirbararka, oo degdeg waxlooga qaban jiray, inaanay cidiba hadhka uga kacayn! Waxaad la yaabaysaa isu jawaabid ka dhaxaysa laba shaqsi oo hadana heer qaran laga dhigayo. Waxaad la yaabaysaa kuwii dalka ugu sareeyay ood moodo inay meel kasaraysa halkaa ay doonayaan.
Isku soo duuboo, murankan siyaasadeed ee hada taagani maaha sida ay wax u muuqdaan. Sadexda Xisbi Qaran waxay isku hayaan laba qodob oo hore aan laysugu qaban sida manta laysugu hayo.
Qodobka 1-aad waa Komishanka oo xisbiga Wadani leeyay hala kala diro isagoo go’aankaas ku salaynaya: komishankii Buugtiisa Ilaashan kari waayay, ee Dafiray, hadana Gudoomiyahoodii Qirtay inuu Buugoodii yahay dee adeer iima qaban karo doorasho xalaala.
Xisbiga Kulmiyena wuxuu leeyay: Bini’aadamka qalad wuu ka dhacaaye, Buugaa yar mooyee, wallee cimrigoodjir, waa Gudi ku haboon inay inoo qabtaan doorashooyin kale!
Xisbiga UCID-na wuxuu taagan yahay: walaalayaal hadii 4% aydin markii hore isiiseen, doorkan hadan kulmiye ku raaco inaydin sii joogtaan, ma isiinaysaan inta wadani oo ah 49%, Wadanina ma siinaysaan 4% ? iyo Haa….Nacam bil-le!
Qodobka 2-aad ama Xaajada kale, ee waxanba ka adag, ee Xisbiga Wadani wataa waxa weeye in Beelaha aan Isaaqa ahayni inay SAAMIGOODII HELAAN, isla markaana Saami-qaybsi cadaalad ku dhisan la sameeyo ka hor doorashada 2019-ka.
Xisbiga Kulmiyena wuxuu taagan yahay: Inta Reer Sheekh Isaxaaq ay qayb libaax Somaliland hogaankeeda haystaan ayay Somaliland jiraysaa. Hadiiba Saamiqaybsi yimaado, Somaliland-na kala jajabtay!
Xisbiga UCID-na wuxuu taagan yahay, Kulmiyoow ma Afkaygaad kala baxday midhkaas !!!!!!!!!!!!
Shaqsi uma jawaabo, Afxumana umada uma horseedo, taasaynu isku ognay Akhristayaal!